La devozione a Santa Brigida e le cinque grandi promesse di Gesù | Ilblogdellafede
Nrara nye Santa Brigida na nkwa ise nke Jesus
VBỌR SE BỌRỌ
Onye-nwe-anyị kpughere ka a gụgharịa ya afọ iri na abụọ, n’enweghị nsogbu ọ bụla
1. Ibi ugwu.
Nna, site n’aka aka dị ọcha nke Meri na Obi nke Jizọs, a na m enye gị ọnya mbụ, ihe mgbu mbụ na ọbara mbụ Ọ wụpụrụ n’ịchụpụ maka ndị na - eto eto niile, dịka ihe nchebe megide mmehie mbụ ahụ nwụrụ anwụ, ọ kachasị. nke ndị ikwu m. Pater, Ave.
2. Ahụhụ Jizọs tara n’elu ugwu Olive.
Nna nke mgbe ebighi ebi, site n’aka aka Jisos kachasi nma ya na obi nke Jisos, a na m enye gi oke ahuhu di egwu nke obi Jisos n’Ugwu Olive, a na m enye gi obara obara ya nye n’onwu n’ihi mmehie m niile nke obi. ndi mmadu nile, dika nchedo megide mmehie ndi di otua na igbasa ihunanya na nke ihunanya. Pater, Ave.
3. Mpịa Jizọs.
Nna nke mgbe ebighi-ebi, site n’aka nke kachasi ọcha nke Meri na Obi nke Jizọs, a na m enye gị otu puku ihe otiti, puku ihe mgbu, ọbara dị oke egwu na aja maka mmehie m niile nke anụ ahụ na maka mmadụ niile, dịka ihe nchebe megide ha yana maka nchekwa nke adịghị ọcha, ọkachasị n'etiti ndị ikwu ọbara m. Pater, Ave.
4. Odee ogwu ogwu Jesu.
Nna nke mgbe ebighi-ebi, site n’aka aka dị ọcha nke Meri na Obi nke Jizọs, a na m enye gị ọnya, ihe mgbu na ọbara dị oke ọnụ nke siri n’isi Jizọs pụta mgbe e jiri okpueze kpuchie ya isi, maka mmehie m nke mmụọ na nke ahụ dum. ndi mmadu dika nchedo ha na iwulite ala eze Chineke n’elu uwa. Pater, Ave.
Ebe nrịgo nke Jizọs gaa na Calvary na obe.
Nna nke mgbe ebighi-ebi, site n’aka aka kacha dị ọcha nke Meri na Obi nke Jizọs, a na m enye gị nhụjuanya nke Jizọs tara gbagoro elu Ugwu Calvary na, ọkachasị Iwu Nsọ nke Ube ahụ na ọbara dị oke ọnụ nke si na ya pụta, mgbaghara mmehie maka mụ na ndị ọzọ maka nnupu isi nke obe, nke jụrụ ihe dị nsọ gị na mmehie ndị ọzọ nke asụsụ ahụ, dị ka ihe nchebe megide ha yana ezi ịhụnanya maka Holy Cross. Pater, Ave.
6. Obe nke Jisos.
Nna nke mgbe ebighi-ebi, site n’aka nke aka dị ọcha nke Meri na Obi nke Jisụs, a na m enye gị Ọkpara gị ka akpọgidere n’obe ma bulie ya n’elu, ọnya ya n’elu aka ya na ụkwụ ya na ọbara dị oke ọnụ sitere na ya n’ihi anyị. oke egwu nke aru na nke Mmuo, onwu ya di oke onu ahia na mmeghari ohuru nke obara n’ememe-nsure-nsọ nile emere n’elu uwa. A na m enye gị ihe ndị a niile ka akachasị nwee mmejọ na nkwa niile dị na iwu okpukpe, iji kwụọ ụgwọ maka mmehie m na ndị ọzọ, maka ndị ọrịa na ịnwụ, maka ndị ụkọchukwu na ndị mmadụ, maka ebumnuche nke Nna Nsọ. n'ihe banyere ezi na ulo nke ndi Kraist, ike nke okwukwe, obodo anyi, ịdị n’otu n’ime Kraist n’etiti mba na n’ime Nzukọ ya, na ndi mba ọzọ. Pater, Ave.
7. ọnya ahụ n’akụkụ Jizọs.
Nna nke mgbe ebighi-ebi, nara, maka mkpa nke nzukọ nsọ na nchụpụ maka mmehie nke mmadụ niile, mmiri na ọbara ahụ dị oke ọnụ si na ọnya ahụ wetaara Obi nke Jizọs na oke enweghị atụ ha wepụtara. Anyi na ario Gi, diri anyi nma ma nwekwa obi ebere! Ọbara Kraist, ihe nsọ kachasi mkpa nke obi dị nsọ nke Jizọs, sachapụ m ma mee ka ụmụnne niile dị ọcha njo niile! Mmiri nke Kraịst, tọhapụ m ntaramahụhụ kwesịrị m maka mmehie m ma chụpụ ọkụ nke Purgatory maka mụ na mkpụrụ obi niile na-asachapụ. Amen. Pater, Ave,
Nkwa nke Jisos: maka ndi g’ekpe ekpere ndia
1. Mkpụrụ obi na-agụ ha agaghị aga pọgatrị.
2. Mkpụrụ obi nke gụrụ ha ka aga anabata n’etiti ndị nwụrụ n'ihi okwukwe dịka a wụsịrị ọbara ya site n'okwukwe.
3. Mkpụrụ obi na-agụgharị ha nwere ike ịhọrọ mmadụ atọ ndị ọzọ Jizọs ga-anagide ọnọdụ nke amara tozuru oke maka ịdị nsọ.
4. O dighi onye n’ime ọgbọ nke anọ na-eso mkpụrụ obi na-agụ ha ga-emebi.
5. Mkpụrụ obi na-agụ ha ga-eme ka ọ mara ọnwụ nke ya otu ọnwa tupu mgbe ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-anwụ tupu ọ dị afọ iri na abụọ, Jizọs ga-eme ka ekpere ahụ dị, dị ka à ga-asị na ha emechaala. Ọ bụrụ n ’otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ funahụrụ ihe ụfọdụ, ị nwere ike gbakee ma emechaa. Ndi n’ekwe nkwa a ekwesighi iche na ekpere ndi a bu ezigbo ikike nke Eluigwe ma ya mere ha puru ibi n’ihu dika odi ha nma. Anyi mara na anyi g’ebikwa na Chineke n’emekorita na ezi obi obughi na aghaghi ikwughachi ekpere ndia, kama na ndu anyi niile.
← Na post gara aga Gara aga post:Pope Francis hoputara onye ode akwukwo ohuru
Ọzọ Post → Post ozo:Ndịàmà hụrụ ahụ nwa Jesus Jesus n’aka Padre Pio